March 3, 2021 - Hargeele - Wararka Somali State
Cayaaraha March 3, 2021
(Barcelona) 04 Maarso 2021. Kooxda Barcelona ayaa sameesay soo laabasho cajiib ah kulanka lugta labaad wareega afar dhamaadka Copa del Rey, kadib markii ay ku xasuuqeen naadiga Sevilla 3-0, Blugarana ayaa jaratay tikidkeeda kulanka finalka ah ee tartankan. Qeybta hore ee kulankan ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hoggaamineysay kooxda kubadda cagta Barcelona. Daqiiqadii Sii akhriso
(London) 04 Maarso 2021. Kooxaha Crystal Palace iyo Manchester United ayaa barbardhac 0-0 ah ku kala baxay, kaddib ciyaar aad u xiiso badan oo ka tirsaneyd kulamada horyaalka Premier League.ay ku wada ciyaareen garoonka Selhurst Park. Qeybta hore ee ciyaarta ayey labada kooxood Crystal Palace iyo Manchester United ku kala nasteen barbardhac 0-0 ah. Qeybta labaad […]Sii akhriso
The unintended consequence of Ethiopia’s civil war might be a border war with Sudan – Atlantic Council
Ethiopia News March 3, 2021
The unintended consequence of Ethiopia’s civil war might be a border war with Sudan Atlantic CouncilSii akhriso
(London) 03 Maarso 2021. Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Crystal Palace iyo Manchester United ee horyaalka Premier League ayaa la shaaciyey. Kooxda Crystal Palace ayaa soo dhaweyn doonta naadiga Manchester United si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan horyaalka Premier League ee dalka England. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo geli […]Sii akhriso
(Barcelona) 03 Maarso 2021. Shaxda rasmiga ah kulanka lugta labaad ee Semi-finlka kooxaha Barcelona iyo Sevilla ee Copa del Rey ayaa la shaaciyey. Kooxda Barcelona ayaa soo dhaweyn doonta naadiga Sevilla si ay u wada ciyaaraan kulanka lugta labaad ee Semi-finlka tartanka Copa del Rey. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo geli […]Sii akhriso
War Saxaafadeed: Bilowgii Xukuumaddu waxay u soo jeedisay mucaaradka in ay mudaharaadkooda ku qabsadaan Eng Yariisow Stadiyoom.
Soomaaliya March 3, 2021
Muqdisho, 03 Maarso 2021: Xukuumadda Jamhuuriyadda Federalka Soomaaliya iyada oo tixgelinaysa geeddi socodka dimuqraadiyada, qabsoomidda doorashooyinka qaranka iyo ilaalinta heshiisyadii mucaaradka waxa ay u ogolaatay mucaaradka codsigoodii ahaa in mudaharaadka ay ku qabsadaan fagaaraha Daljirka Dahsoon. Bilowgii, Xukuumaddu waxay u soo jeedisay mucaaradka in ay Sii akhriso
Agaasinka Waxbarashada Gobolka Banaadir oo dib u haybeyn ku sameeyay xarumo Waxbarasho “SAWIRRO”
Muqdisho (SONNA)-Agaasinka Waxbarashada Gobalka Banaadir oo kaashanaya Wasaaradda Waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta Sare ayaa dib u habbeyn iyo horumarin ku sameeyay dugsiyada Dadweynaha ee 24-ka. Isbeddelkaan oo socday maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa maanta xilkii loo kala wareejiyay Maamulaha cusub ee dugsiga Gaashaanle iyo labadii Maamule ee hore, xilwareejinta Sii akhriso
(Paris) 03 Maarso 2021. Tababaraha khabiirka ah reer France ee Arsene Wenger ayaa wareysi uu la yeeshay wargayska “Le Parisien” wuxuu ka hadlay dhowr arimood oo laxiriira kubadda cagta xilligan ama mustaqbalka. Arsene Wenger ayaa ka hadlay mustaqbalka xiddiga reer France France iyo kooxda Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappe, gaar ahaan xiisaha weyn ee Sii akhriso
(Barcelona) 03 Maarso 2021. Tababaraha kooxda kubadda cagta Barcelona ee Ronald Koeman ayaa ku dhawaaqay liiska xiddigaha kooxdiisa uga qeyb galaya kulanka caawa Sevilla ee lugta labaad wareega afar dhamaadka tartanka Copa del Rey. Barcelona ayaa ku soo dhaweyn doonta kooxda kubadda cagta Sevilla garoonkeeda Camp Nou, waxaana liiska uu ku dhawaaqay macallin Ronald Sii akhriso
Madaxweyne Farmaajo oo Shir deg deg ah la qaatay bahda caafimaadka, maamulka gobolka Banaadir iyo ururada Bulshadda rayidka “Sawirr”
Muqdisho (SONNA), Maarso 03, 2021; Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulan la qaatay Guddiga Qaran ee Xakameynta Cudurka COVID-19 iyo Bulshada Rayidka ayaa ka dhageysta warbixin ku saabsan saameynta caafimaad iyo dhaqaale ee soo laba kaclaynta cudurkan safmarka ah. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Xukumadda Federaalka Sii akhriso